Ny fampiharana ny WMS ao amin'ny indostrian'ny pharmaceutement Warehouse Management System (WMS), nohafohezina ho WMS, dia rindrambaiko iray mitantana toerana fitahirizana ara-materialy. Tsy mitovy amin'ny fitantanana lisitra izany. Amin'ny lafiny roa no tena fiasan'izy io. Ny iray dia ny fametrahana warehou ...
Ny crane stacking crane dia ny crane manokana novolavolaina niaraka tamin'ny fisehon'ny trano fitehirizana telo refy, antsoina hoe ny stacker, dia fitaovana fampakarana sy fikirakirana tena lehibe ao amin'ny trano fanatobiana telo-habe, ary mariky ny toetra .. .
Manafaka ny herin'olombelona ny seranan-tsambo, saingy mila arovana koa ireo milina fitehirizana sy famerenana tsy mahatsapa. Avia ary jereo raha misy ireto toe-javatra manaraka ireto mandritra ny fampiasana ny shuttle. 1. Mahatsiaro mafana ny akorany raha mikasika raha misy exter ...